Steve Jobs ပြဇာတ်ရုံ၌လှည့်နေသောဓာတ်လှေကားများနှင့်လျှို့ဝှက်သရုပ်ပြခန်းပါဝင်သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
Steve Jobs ပြဇာတ်ရုံ၌လှည့်နေသောဓာတ်လှေကားများနှင့်လျှို့ဝှက်သရုပ်ပြခန်းပါဝင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Apple မှကမ္ဘာသို့ပြသရန်ရက်အနည်းငယ်သာရှိသေးသော်လည်း၎င်း၏မျိုးဆက်သစ်ပုံစံဖြစ်ဖွယ်ရှိသည် iPhone ကို 8။ ဒါပါလိမ့်မယ် စတိဗ်ဂျော့ဘ်စကိတ်၌ပထမဆုံးဖျော်ဖြေမှုဖြစ်သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ကူဖီးတီနိုရှိအက်ပဲဥယျာဉ်သစ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူကိုဂုဏ်ပြုသောခန်းမဖြစ်သည်။
အဲဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာ ဘလွန်းဘာ့ဂ် စတိဗ်ဂျော့စ်ပြဇာတ်ရုံ၏အတွင်းပိုင်းနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုတင်ခြင်းဖြင့်အင်ဂျင်ကိုနွေးအောင်စတင်ခဲ့သည် ဓာတ်လှေကားလည်ပတ် သူတို့ထသို့မဟုတ်လဲအဖြစ်နှင့် ရွေ့လျား panel တစ်ခု၏နောက်ကွယ်တွင်ဖုံးကွယ်ထားသောသရုပ်ပြareaရိယာ.
ငါသေချာပါတယ် စတိဗ်ဂျော့ဘ်ပြဇာတ်ရုံကထူးဆန်းတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြပါလိမ့်မယ် နောက်လာမည့်အင်္ဂါနေ့တွင်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော iPhone ၏မျိုးဆက်သစ်ကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အက်ပဲ၏ကွယ်လွန်သွားသောစီအီးအိုစတိဗ်ဂျော့ဘ်၏မှတ်ဉာဏ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရည်စူးထားသောဤထူးခြားသည့်အဆောက်အအုံ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းသိရှိလာပြီဖြစ်သည်။
ခန်းမသည် ကုန်းမြင့်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဖန်ပတ်နံရံများကြောင့် Park ည့်သည်များပန်းခြံအသစ်ကိုမတူနိုင်တဲ့အမြင်ကိုခံစားခွင့်ပြုသည်။ 12 ရက်နေ့တွင်မီဒီယာတစ် ဦး မှတဆင့်ဝင်ပါလိမ့်မယ် ဖန်ပတ်ရစ် lob ည့်ခန်း။ ထိုအရပ်မှသူတို့သည်မှတဆင့်ဆင်းနိုင်ပါတယ် နှစ်ခုကွေးလှေကား အဓိကခန်းမသို့သွားသော်လည်း၎င်းတို့သည်မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုသုံးနိုင်သည် နှစ်ခု rotary ဓာတ်လှေကား တိုင်းတာရန်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ဒီဓာတ်လှေကား နေရာချထားသူများသည်သူတို့ဝင်သောတူညီသောတံခါးကို ဖြတ်၍ ထွက်သွားနိုင်ရန်လှည့်ပါကွဲပြားခြားနားသောလမ်းညွန်အတွက်ပေမယ့်။
စတိဗ်ဂျော့ဘ်ပြဇာတ်ရုံတွင်စွမ်းရည်ရှိသည် 1.000 နေရာချထား နှင့်များစွာသောအခြား သားရေထိုင်ခုံများ အဘယ်သူ၏စျေးနှုန်းတစ်ယူနစ် $ 14.000 မှာခန့်မှန်းထားသည်။ တင်ပြချက်အပြီးတွင်တက်ရောက်လာသူများသည်ဗိသုကာဆိုင်ရာအံ့သြဖွယ်ရာများပိုမိုစောင့်ကြိုနေသည်။
အထူးသဖြင့်အဆောက်အ ဦး ၏ဝင်ပေါက်အနီးတွင်နံရံတစ်ခုရှိပြီးသင့်အားနောက်ကွယ်ရှိအရာများအားမမြင်နိုင်ရန်တားဆီးပေးသည်။ သို့သော်အဖြစ်အပျက်အဆုံးသတ်ပြီးတက်ရောက်သူများသည်မျက်နှာပြင်သို့ပြန်လာသောအခါ ထုတ်ကုန်သရုပ်ပြအခန်းကိုထုတ်ဖော်ပြသလိမ့်မည် အဆိုပါ keynote အတွက်ကြော်ငြာအားလုံးထုတ်ကုန်နှင့်အတူ။
ထို့ကြောင့်လာမည့်အင်္ဂါနေ့သည်အံ့သြဖွယ်ရာများစွာသောကျွန်ုပ်တို့အားစောင့်ကြိုနေပုံရသည် ထုတ်ကုန်သစ်များ ၏ Apple ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » NOTICIAS » Steve Jobs ပြဇာတ်ရုံ၌လှည့်နေသောဓာတ်လှေကားများနှင့်လျှို့ဝှက်သရုပ်ပြခန်းပါဝင်သည်
Man ... မင်းမြေအောက်နေမယ်ဆိုတာမင်းသိရင်မင်းဒါကိုကောင်းကောင်းစဉ်းစားတဲ့အခါ၊ ဒါပေမယ့်သေချာပေါက်အားလုံးလိုအပ်သောလုံခြုံရေးအစီအမံရှိပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ဖြစ်သင့်တယ်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ!
MeasureKit က Augmented Reality သည်မည်မျှအသုံးဝင်မည်ကိုပြသည်